10 Magaalooyinkii Qadiimiga Ahaa Ee Ugu Quruxda Badnaa Si Loogu Booqdo Aduunka | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Magaalooyinkii Qadiimiga Ahaa Ee Ugu Quruxda Badnaa Si Loogu Booqdo Aduunka
Tareenka Safarka Belgium, Tareen safarka Shiinaha, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, Tareen Safar Talyaani, Tareen Travel The Netherlands, safarka Europe
Waqtiga Akhriska: 7 daqiiqo(Last Updated On: 06/02/2021)
Ku xeeran dabeecadda ugu quruxda badan, aan la taaban waqtiga, waa 10 magaalooyinka qadiimiga ah ee ugu quruxda badan adduunka oo dhan. Guud ahaan Yurub ilaa magaalooyinka qadiimiga ah ee xiisaha leh ee Shiinaha, safarkan waxaa ka buuxi doona sheekooyin laga soo bilaabo waqtiyadii dhexe ilaa waqtiyadeenna.
gaadiidka Tareenka waa habka ugu bay'adda u fiican in safarka. Maqaalkani waxa la qoray si loo baro oo ku saabsan tareenka Travel oo waxaa looga dhigay by Save A tareenka, Tigidhada Tareenka ugu Jaban Yurub.
1. Inta Badan Magaalooyinka Qadiimiga ah ee Quruxda Badan Si Loogu Booqdo Yurub: Civita Di Bagnoregio, Italy
1200 sano jir ah, leh asal ahaan soo jireenka ah qarnigii lixaad, Civita di Bagnoregio waa kan ugu da'da weyn magaalada quruxda badan ee Yurub. Qasrigan waxaad ka heli doontaa Cirka 110 ka fog Rome, ku nasanaaya buur dhinaceeda. Hadaad booqato magaaladan quruxda badan ee xagaaga, waxaad u badan tahay inaad la kulmi doonto 100 deggeneyaasha ku soo noqda si ay ugu raaxaystaan ​​aragtida baaxadda leh ee gobolka Viterbo.
Waxaa intaa dheer, waxaad ka heli doontaa waxa ugu xiisaha badan si aad u aragto in magaaladu ilaashatay naqshadaha Dr Makumbe ka dib 2 dagaalada aduunka, iyo tiro ka mid ah wasakhda fulkaanaha. Sayidka, dadaal badan ayaa la sameynayaa si loo ilaaliyo jawharaddan Talyaani ah, isaga oo ka ilaalinaya inay u dhimato. Sidaas, intaysan baabi'in waa inaad tareenka u raac Viterbo, ka Rome Termini fasaxaaga xiga ee Talyaani.
Rome ilaa Viterbo Tareen Tareen ah
Siena ilaa Orvieto Tareen
Arezzo oo ku socota Orvieto Tareen
Perugia ilaa Orvieto Tareen
2. Magaalooyinka Qadiimiga Ah Ee Ugu Quruxda Badan Si Aad U Booqatid Aduunka: Rothenburg Old Town, Germany
Markaad joogto Jarmalka waa inaad ku safarto Wadada Jaceylka, a 40 daqiiqo’ kaxayso tuulooyinka ugu quruxda badan in Germany. Sidoo kale waa meesha aad ka heli doonto mid ka mid ah 10 magaalooyinka quruxda badan ee gaboobay si ay u booqdaan adduunka oo dhan, Rothenburg.
Rothenburg ob der Tauber waa magaalada sixirka medieval gudaha Bavaria, Germany. Guryaheeda midabkoodu midabkiisu yahay nus-timireedka ayaa wali lama taabtaan ka dambeeya darbiyada magaalada oo sifiican loo ilaaliyay. Magaalada qadiimiga ah ee soo jiidashada leh ayaa magaceeda heshay iyada oo ay ugu wacan tahay meesha ay ka sarreyso webiga Tauber, goob istaraatiijiyad u ah unugyada, horaantii qarnigii 1aad C.E. Rothenburg’s Plonlein, Fagaaraha Markt, luuq luuq luuq, iyo Castle Gardens ayaa ka dhigeysa mid ka mid ah magaalooyinkii qadiimiga ahaa ee ugu soo jiidashada badnaa Yurub, iyo adduunka.
Berlin ilaa Rothenburg Ob Der Tauber Tareen
Stuttgart ilaa Rothenburg Ob Der Tauber Tareen
Munich ilaa Rothenburg Ob Der Tauber Tareen
Frankfurt ilaa Rothenburg Ob Der Tauber Tareen
3. Magaalada Qadiimiga Ah Ee Ugu Quruxda Badan Si Aad U Booqato Aduunka: Fenghuang Gudaha Shiinaha
Magaalada Qadiimiga ah ee Phoenix, Fenghuang waa mid ka mid ah magaalooyinka qadiimiga ah ee Shiinaha. Marka aad soo gasho magaalada quruxda badan, aragti yaab leh buundooyinka, macbudyo, iyo nolosha biyaha dul saar ah ayaa adiga kuu muujin doonta, iyadoo lagu dhex jiro geedaha culus iyo dabeecadda ku xeeran.
Iyada oo taariikh ah 400 sano, ka tirsan boqortooyooyinkii Ming iyo Qing, Fenghuang, waa mid ka mid ah meelaha aan la iloobi karin Shiinaha. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha iyo xiisaha badan ee ku saabsan magaaladan qadiimiga ah ee Shiinaha ayaa ah in dadka magaalada deggan, qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee Miao iyo Tujia, wali waxay ilaalinayaan dhaqankii hore ee casriyeynta iyo nolosha guryaha jirkii hore ka sameysnaa.
4. Magaalada Qadiimiga ah ee Nanjing, Shiinaha
Darbigii ugu weynaa ee adduunka soo maray, Nanjing, wuxuu ku yaal Webiga Yangtze. Nanjing waa mid ka mid ah 4 caasimadaha qadiimiga ah ee Shiinaha. Intaa waxaa dheer, Nanjing waa mid ka mid ah magaalooyinka qadiimiga ah ee ugu quruxda badan adduunka. Tan waxaa ugu wacan darbiga magaalada ee cajiibka ah ee wali taagan oo ku xeeran magaalada, iyada oo aan laga haynin waqtiga iyo taariikhda.
Si kastaba ha ahaatee, aragtida ugu caansan ee Nanjing waa xilliyada habeenkii. Mugdi kadib, magaalada oo dhan ayaa shidan, iyo Macbadka 'Confucius Temple' ee cajiibka ah ayaa xitaa ka sii cajaa'ib badan. Intaa waxaa dheer, waxaad booqan kartaa astaamo kale oo caan ah oo ka soo jeeda qoyskii Ming, qarnigii 14aad. Tusaale ahaan, Sun Yatsen’s Mausoleum.
5. Inta Badan Magaalada Quruxda Badan Si Loogu Booqdo Yurub: Avignon, France
Magaalada cajiibka ah ee Avignon ee Provence waxaa la dhisay qarnigii 14aad. Magaaladan sixirka ah waxay hoy u ahayd Baadariyiinta, umana baahnid inaad ka tirsanaato caqiidada Masiixiyiinta, si loo bogaadiyo baadariyada’ qasriga gothic. Ka dib markaad bogaadiso qasriga waxaad ku dalxiis tagi kartaa wabiga quruxda badan ee Rhone tan iyo markii Avignon uu ku yaalo banka bidix, ama fiiri buundada caanka ah ee Saint-Benezet, laga soo bilaabo qarnigii 12aad.
Faras magaalaha duug ah ayaa sifiican loogu qariyay gadaashiisa dhufaysyada si fiican loo ilaaliyay iyo 39 daawayaasha. Intaa waxaa dheer, haddii ay dhacdo inaad booqato Avignon dhamaadka usbuuca, waad ku raaxeysan doontaa Suuqa Axada Axada, ama xagaaga, markaa waxaad nasiib u yeelan doontaa inaad ka soo qaybgasho xafladda tiyaatarka caanka ah ee Avignon “in” iyo “off” bishii July.
Paris ilaa Avignon Tareen
Wanaagsan Avignon Tareen
Marseilles oo ku socota Avignon Tareen
6. Inta Badan Magaalada Quruxda Badan Si Loogu Booqdo Yurub: used
Jacayl, soo jiidasho, oo leh qaab dhismeedka qarnigii 14aad, Baaruuddu waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu qadiimsan Yurub. Magaalada ugu da'da weyn ee Biljimka, used dukaamada shukulaatada, fagaaraha suuqa, buundooyinka, iyo xarunta taariikhiga dhexe qadiimiga ah soo jiitaan 8 milyan soo booqda sanad walba.
Sidaa darteed, inbadan ayaad kaheli doontaa hadaad safar gasho xilli-fasax, oo ku milma deegaanka 120,000 dadka deegaanka. Sidaas, Toddobaadka dhammaadka ah wuxuu ku habboon yahay in la ogaado magaaladan qadiimiga ah ee Biljimka runtiina aad u bogaadiya soo jiidashada sheeko xariirooyinka wanaagsan.
Amsterdam Si Loogu Kiciyo Tareen
Brussels Si Loogula Kaco Tareen
Tareen lagu raaco Antwerp
7. Magaalooyinkii Qadiimiga Ahaa Ee Ugu Quruxda Badnaa Ee Lagu Booqdo Shiinaha: Luoyang, Shiinaha
Longmen Grottos iyo macbadka Shaolin, yihiin oo kaliya 2 oo ka mid ah goobaha ka dhigaya magaalada qadiimiga ah ee Luoyang mid ka mid ah magaalooyinka qadiimiga ah ee ugu caansan adduunka. Waxaad ka heli doontaa xarunta of Chinese Universe Luoyang magaalo qadiim ah, u dhexeeya Beijing iyo Xi’an, tareen rasaas.
Magaalada qadiimiga ah ee Luoyang ayaa wali taagan, aan taaban taariikhda iyo waqtiga, tan 1600 BC. Sidaa darteed, waad ku qanci doontaa markaad aragto albaabka weyn ee magaalada oo ku lifaaqan nolosha magaalada. Intaa waxaa dheer, waxaad ku dhex mari doontaa meeshii ganacsatadii ugu horeysay ee Wadada Xariirta ahi soo martay.
8. Magaalada Ugu Quruxda Badan Qadiimiga Si Aad U Booqato Aduunka: Prague
Old Town, sida ay yaqaanaan dadka deegaanka, Magaalada Prague Old, soo jiidata martida ilaa qarnigii 9aad. Waxaa ku soo jiidan doona magaaladan qadiimiga ah ee quruxda badan. Sidaa darteed, hadaad fursad hesho, booqo Prague ugu yaraan usbuuca. Sidan ayaad ku ogaan doontaa sababaha badan ee ay tahay mid ka mid ah magaalooyinka qadiimiga ah ee ugu quruxda badan adduunka.
Xarunta hore ee taariikhiga ah ayaa weli ah faras magaalaha, ilaa maanta, meesha loogu talagalay dhammaan nolosha dhaqanka. Waxaad arki doontaa in dhammaan dalxiisayaashu ay isugu soo ururaan saacadda xiddigiska saacad kasta bartamaha.
9. Magaalada Ugu Quruxda Badan Qadiimiga Si Aad U Booqato Aduunka: Amsterdam
Amsterdam waa mid ka mid ah kuwa ugu badan magaalooyinka caanka ah in Europe, iyo midka ugu yar. Tani waxay ka dhigan tahay inaad laba maalmood ku dhex mari karto magaalada oo dhan. Si kastaba ha ahaatee, what most tourists don’t know is that this Beautiful Dutch town is one of the ancient towns in the world.
Sidaa darteed, in kasta oo ay le’eg tahay, Magaalada qadiimiga ah ee Amsterdam waxay leedahay baro badan oo gaar ah oo aad ubaahantahay usbuuc si aad uhesho. Magaalada qarnigii 13-aad waxay leedahay barxado badan oo qarsoon, jasiiradaha xasilloonida, ama Oude Kerk, dhismaha ugu da'da weyn Amsterdam, degmada cas. Isku soo wada duuboo, wax badan ayaad ku arki lahayd Amsterdam marka loo eego markab dhaqameedka caadiga ah ee dalxiiska haddii aad ujeeddadeedu tahay inaad ogaato sheekooyinkeeda qarsoon.
10. Ping Yao Magaaladii Hore ee Shiinaha
Tan ugu xiisaha badan ee ku saabsan magaalada qadiimiga ah ee Ping Yao waa isku dhafka qaababka dhismaha. Intaad ku meeraysato jidadkii hore, guryaha, macbudyo, iyo darbiyada magaalada ayaa ka sheekayn doona sheekooyin 5 qarniyo. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in magaaladii hore ee Ping Yao la dhisay qarnigii 14aad.
Haddii aad jeceshahay taariikhda oo aad la dhacsan tahay dhaqanka Shiinaha, markaa socod lug ah oo ku socda waddada weyn ee magaalada waxay noqon doontaa khibrad baaxad leh. Waxaad waqti u safri doontaa xilli Pingyao uu ahaan jiray xarunta dhaqaale ee Shiinaha, oo arag in ku dhowaad waxba isma beddelin.
Dahabkan qadiimiga ah waxaa si fudud loogu tagi karaa tareen, kaliya u safri Saldhigga Tareenka ee Pingyao Gucheng, halkaasna baska looga raaco ilaa irdaha magaalada.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku faraxsanaan doonaa inaan kaa caawino qorsheynta safar lama ilaawaan ah iyo balaarin "10 Magaalo Qurux Badan Oo Qurux Badan Si Aad U Booqato Aduunka".
Ma rabtaa inaad ku dhejiso bartayada blog-ka "10 Meelo Qurux Badan Oo Qurux Badan Si Aad U Booqato Dunida" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fancient-towns-visit-worldwide%2F%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
AncientTowns AncientTownsInChina BeautifulancienttownsEurope Bestoldtownsworldwide tareen safarka